HATSIKANA. Na halatra io na hosoka io, dia tonga mividy foana isika malagasy • Madagossip
il y a 2 années 2 K
Raha Antananarivo sy ny tontolo manodidina azy no jerena dia toy izao no azo hamaritana azy : loto, halatra, ady varotra, tahotra, kolikoly, fanenjehana, fitsaram-bahoaka, halatra, fitaka.
Tsy mitsaha-mitombo ny mponina eto an-dRenivohitra ary efa tsy maharaka izany intsony ny foto-drafitr’asa rehetra izay misy. Fa ny tena hita taratra amin’izao raha eny amin’ny sehatry ny varotra no jerena dia ny « ady varotra » no betsaka na halatra aza no varotana.
Namoaka horonan-tsary kely ny « Agence Ako » efa taona vitsivitsy lasa izay, hamintinana ny fiainana hita eto Antananarivo indrindra ny fiadim-barotra rehefa mividy entana. Maro ny olona liana tanteraka ary nanome hevitra mahakasika izany ankehitriny raha naverina nalefa ho hitan’ny be sy ny maro indray ity horonan-tsary ity teo amin’ny fesiboky.
Tao amin’ny pejy « Madagascar Hier et Aujourd’hui » no nahitana ilay horonan-tsary kely amin’ny teny malagasy. Mahaliana no sady mahafinaritra ilay sarimiaina, ary mety hampatsiahy anao ireo fomba fanaon’ny olona andavanandro indrindra fa manodidina ny Analakely : Petite vitesse, Behoririka iny. Koa mitandrema aza fa ny ratsy tsy kely làlana fa ny hanataka ny ao am-paosinao ihany.
Tagsady varotra arnaque halatra hosoka
A vous la parole	il y a 1 année
Sekta afrikana iray. Saika hanararaotra ilay pasitera saingy tsy nampoiziny ny zavatra nitranga